အယ်လ်ကိုဟော၏ ကနဦး ရာဇ၀င် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » အယ်လ်ကိုဟော၏ ကနဦး ရာဇ၀င်
အယ်လ်ကိုဟော၏ ကနဦး ရာဇ၀င်
Posted by Shwe Ei on Nov 24, 2012 in Food, Drink & Recipes | 39 comments
ံHistory Of Beer
Beer was the first alcoholic beverage known to civilization.
ဘီယာဆိုတာ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ပထမဆုံးသော သောက်စရာ အယ်လ်ကိုဟောဖြစ်ပါသတဲ့ရှင့်။
သို့သော် ပထမဦးဆုံးသောဘီယာကို သောက်ခဲ့ရတာ
ဘယ်သူဆိုတာတော့ အတိအကျမသိပါရှင်။ သမိုင်းပညာရှင်တွေရဲ့ သီအိုရီကတော့ လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့ ဘီယာအပေါ်နှစ်သက်စွဲလမ်းမှုနဲ့ အခြားသော အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်တဲ့ သောက်စရာများဟာ ကျမတို့ရဲ့
ပြောင်းရွှေ့ကျက်စားတတ်သောအမဲ လိုက်မုဆိုးများလူ့အဖွဲ့အစည်းမှ တဆင့် ကောက်ပဲသီးနှံတွေကို အခြေတကျထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကျသော (ရှင်းရှင်းပြောရရင် သောက်စရာရဖို့အတွက်ပေါ့လေ) လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့
ပေါင်းစည်းမှုကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်တဲ့။ လူသားတွေအနေနဲ့ အစေ့ အဆန်တွေနဲ့ရေကနေတဆင့် ပေါင်မုန့်လုပ်လို့ရမှန်းမသိသေးခင် ပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ထုတ်ကုန်က ဘီယာပါတဲ့ရှင်။
ယဉ်ကျေးမှုချင်းမတူညီကျသော နေရာတော်တော်များများက လူ့အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများဟာ သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဘီယာကို မတူကွဲပြားသော အစေ့အဆန်တွေသုံးပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့ကျတယ်ရှင့်။ အာဖရီကန်တွေက နှံစားပြောင်း၊ ပြောင်းဖူး နဲ့ ပီလောပီနံဥတွေကို ဘီယာချက်လုပ်ဖို့ သုံးကျတယ်။ တရုတ်လူမျိုးတွေက ဂျုံကိုသုံးတယ်။ ဂျပန်တွေက ဆန်ကိုသုံးတယ်။ အီဂျစ်လူမျိုးတွေက ဘာလီကိုသုံးတယ်။
ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် မျက်မှောက်ခေတ် ဘီယာထုတ်လုပ်မှုပုံစံမှာ အနံ့အတွက်ထဲ့သုံးတဲ့ နွယ်ပင်တမျိုးကပွင့်တဲ့ပန်းပွင့်တွေကိုတော့ ခရစ်တော်ပေါ်ပီးကာလ ၁၀၀၀ခုနှစ် (1000 AD) ထိအသုံးမပြုကျသေးပါတဲ့ရှင့်။
ခေတ်သစ်ဘီယာချက်လုပ်မှုပုံစံမှာတော့ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အအေးခန်းသိုလှောင်ထားရှိမှုစနစ်၊ အလိုအလျောက်ပုလင်းသွပ်တဲ့စနစ် နဲ့ ပေါင်းခံပိုးသတ်မှု စတဲ့ တီထွင်ကြံဆမှုမျိုးမရှိဘဲ လုပ်ငန်းစဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ရှင်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းလေးထောင်ကဘေဘီလုံမှာ မင်င်္ဂလာပွဲတခုကျင်းပပြီးတဲ့အခါတိုင်း သတို့သမီးရဲ့အဖေက သူ့သမက်အတွက် တလစာ လုံလောက်တဲ့ ပျားရည်ဘီယာ သို့မဟုတ် ဘီယာကို ထောက်ပံ့ရသတဲ့ရှင့်။ ရှေးတုန်းကဘေဘီလုံမှာ လဆန်း လဆုတ်ကိုမူတည်ပြီး လကိုခြေခံတဲ့ ပြက္ခဒိန်ကိုအသုံးပြုပါတယ်တဲ့။ မင်္ဂလာပွဲတခုကျင်းပပြီးသွားတိုင်း အဲဒီ့တလလုံးကို “honey month” လို့သတ်မှတ်ရာကနေ “honeymoon”အဖြစ်ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်လာကျတာပါတဲ့ရှင်။ ပျားရည်ဘီယာဆိုတာကတော့ ပျားရည်ကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဘီယာဖြစ်ပြီး ပျားရည်ဆမ်းထားသောလ (honeymoon) ကိုကျင်းပဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါတဲ့။
ဇန်န၀ါရီ ၂၄၊ ၁၉၃၅မှာ ပထမဦးဆုံးသော စည်ဘီယာ “Krueger Cream Ale” ကို Kruger Brewing Company of Richmond, VA ကထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်တဲ့။
ပထမဦးဆုံးသော အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်တဲ့ သောက်စရာကို ဘယ်အချိန်မှာ ဖန်တီးထုတ်လုပ်ခဲ့ကျ
သလဲတော့မသိရပါဘူး။ ဓါတုဗေဒနည်းအရ ပြောင်းလဲဖေါ်စပ်ထားသော သောက်စရာတွေကို ဘီယာခရားတွေအဖြစ်နဲ့မြင်ရတဲ့ မျက်မြင်သက်သေကတော့ နီယိုလစ်သစ်(Neolithic or New Stone Era) အခါသမယပါတဲ့ရှင့်။
Beer _ ဘီယာ
တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသော လူ့အဖွဲ့စည်းရဲ့ ပထမဆုံးသော အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်တဲ့ သောက်စရာ။
ပြင်သစ်ဘုန်းတော်ကြီးတွေက အမြုပ်ထွက်သော ဂက်စ်ပါတဲ့ဝိုင်ကို ပုလင်းပုံစံသွတ်သွင်းပြီး ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ ဒေသတခုဖြစ်တဲ့ စပျစ်သီးစိုက်ပျိုးသောဒေသ ရဲ့နံမည် ရှန်ပိန်ကို အစွဲပြုကာ ရှန်ပိန်လို့မှည့်ခေါ်ခဲ့ကျပါသတဲ့။
Cider _ စိုင်းဒ (စိုင်းဒါး)
ကျမစိတ်ထင်ပြောရရင် ပန်းသီးရဲ့သမိုင်းကြောင်းဆိုတာ ကျမတို့ရဲ့ ကောက်ပဲသီးနှံများကို အခြေတကျ ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးသောလူမျိုးစု သမိုင်းကြောင်းကိုဆိုလိုချင်တာရှင့်။ ပဲလီယိုလစ်သစ် (prehistoric period of human history) လေ့လာသူများကတော့ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၇သိန်းခွဲ (750,000 years ago) ၊ ပဲလီယိုလစ်သစ်(Paleolithic)အစောပိုင်းကာလမှာ ပန်းသီးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ ခန့်မှန်းကျတယ်ရှင့်။ ပန်းသီးရဲ့ ကာဗွန်ရုပ်ကြွင်းကို ခရစ်တော်မပေါ်မီ သက္ကရာဇ် ၇၅၀၀ (7500 BC) သက်တမ်းကလို့ သတ်မှတ်ခဲ့ကျတယ်။ မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေက ဖေါ်ပြကျတာကတော့ ခရစ်တော်မပေါ်မှီ သက္ကရာဇ် ၁၃၀၀ (1300 BC) တုန်းက နိုင်းမြစ်ဝှမ်းတလျှောက် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးနိုင်သော မြေယာတွေမှာ ပန်းသီးစိုက်ပျိုးခြင်းကို ကြီးမားကျယ်ပြန့်စွာ လုပ်ဆောင်နေကျပြီလို့ဆိုပါတယ်။ ကိုလိုနီခေတ်တလျှောက် ပန်းသီးစိုင်းဒါးကို အယ်လ်ကိုဟောအဖြစ် ရွေးချယ်သောက်သုံးခဲ့ကျပါသတဲ့။ Johnny Chapman လို့နံမယ်ရတဲ့ Johnny Appleseed လို့လူသိပိုများတဲ့ လူငယ်လေးတယောက်က စိုင်းဒါးပျံနှံ့မှုနဲ့ပတ်သတ်လို့ ကြီးကြီးမားမား (သွယ်ဝိုက်သောနည်းနဲ့) တာဝန်ှရှိပါသတဲ့ရှင်။
Jagermeister _ ဂျားမားစတား /je rma st r/
(အသံထွက်မှန်ခြင်းမမှန်ခြင်း အာမ မခံဘာ)
ဂျားမားစတားဆိုတာ ၁၉၃၅တုန်းက ဂျာမနီနိုင်ငံ Wolfenbuttel မှာပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်သော အရည်ပါတဲ့။ ဂျားမားစတားရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က “a master-hunter”ပါတဲ့။ ဒါကြောင့် မုဆိုးများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူ Saint Ubert ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ သမင်သင်္ကေတကို တံဆိပ်အနေနဲ့သုံးပါတယ်။ ဒီသောက်စရာကတော့ ၅၆မျိုးသော အပင်၊ အမြစ် ၊ အသီးအနှံတွေရဲ့အခွံတွေနဲ့ ရောစပ်ထားပြီး ၁၂လကြာအောင်ထားရပါသတဲ့ရှင့်။ စိတ်မပူပါနဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေထဲမှာ သမင်သွေးလုံးဝမပါကြောင်းပါ။
ရင်းမြစ်တော်တော်များများဆီက သိရတာတော့ အမည်မသိ ဒပ်ခ်ျကုန်သည်တယောက်က ၁၆ရာစုမှာ ဘရန်ဒီကို တီထွင်ခဲ့ပါသတဲ့။ ၀ိုင်ကိုဆူပွက်လာအောင်ကျိုချက်ပြီး ရေတွေကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့် ၀န်စည်စလယ်တွေတင်ဖို့နေရာ ကျယ်ကျယ်ရအောင်ကြံစည်တာပါတဲ့။ Brandewijn ရဲ့အဓိပ္ပါယ်က လောင်ကျွမ်းပြီးသောဝိုင် “burnt wine”လို့ ဒပ်ခ်ျလိုဖွင့်ဆိုပါတယ်။ အနဲငယ်သော ရင်းမြစ်တချို့ကတော့ တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့မူပိုင်လို့ဆိုပါတယ်။ ဘရန်ဒီကို စပျစ်သီး ဒါမှမဟုတ် အခြားသီးနှံများဖြစ်တဲ့ ပန်းသီး ၊ အက်ပရီကော့တ် (apricot) သီးနှံတွေကနေ ကျိုချက်ထုတ်လုပ်ပါတယ်ရှင်။
By Shwe Ei (ရှာဖွေစုဆောင်းဝေမျှသည်။)
Stupid & Active ဘလက်ချောကြီးက
မိုက်မိုက်မဲမဲ တက်တက်ကြွကြွ ၀င်ဖတ်ပြီး
အရက်သမားသမဂ္ဂမှ ကြို….ဆို….ဘာ….ဒယ် :harr:
ရွှေအိ ဘီယာကို အားပေးသွားတယ်။
ရော့စ် ရော့စ် ကြိုက်လောက်သာ ယူပေတော့ မခိုင်ဇာရေ။
ပထမဆုံး ဘီယာကို သောက်တဲ့လူဂ ..
ဘူ မှတ်လို့ဒုံး …
မောင်ငေးအံ ဂျ .. မောင်ငေးအံ …
အမဂျီးရဲ့ ဘီယာ အကြောင်းတွေကို
ဗဟုသုတအတွက် ဖတ်သွားပါတယ်ဂျာ …
ထွေးညို အကြောင်းလဲ မပါဘူး
ပြည်တွင်းဖြစ် ကို အားမပေးချင်ဘူးလား
ရေးတော့ လည်း လူသိနည်းတဲ့ အကြောင်းလေးတွေဆိုတော့ 
တကယ့် ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပါဗျာ ။ ကျနော်က အကြားအမြင်နဲလို့ 
ခုမှသိရတာဆိုတော့ကျေးကျေးကုဋေပါဗျို့  ။
လူတွေယဉ်ကျေးမှုစကတည်းက မူးစေတတ်တဲ့  အရာကို တီထွင်
ခဲ့ ကြတယ်ထင်တယ်နော ။
ရှေးရှေးကတော့ သစ်ခေါင်းကြီးထဲကို မိုးရေနဲ့သစ်သီးတွေရောပြီး
မန်းလေးမှာတော့ ဟိုးအရင်က ထွေးညိုချက်တဲ့နေရာလေးတွေက ပြင်ဦးလွင်တက်တဲ့လမ်းဘက်မှာ။
သူတို့ကောင်းမူ့ကြောင့် မန်းလေးက ထနောင်းပင်တွေလဲ အရေခွံအခွာခံရတာ ရှက်လို့ဆိုပြီး
(အဲဒီနာမည်ကိုခေါ်တိုင်း ကျနော် စဝင်ရေးကာစ အဖြစ်အပျက်လေးကိုအမှတ်ရမိတယ်)
ကျနော်က မရွှေအိကို ကိုရွှေအိ (ယောက်ကျားလေးမှတ်လို့)ခေါ်မိတာ ညီလေးမောင်ပေ က
ကိုသစ်မင်းရေ အဲဒါ မရွှေအိပါဗျ လို့ ဝင်ပြောပေးခဲ့လို့ တောင်းပန်ခဲ့တာလေးမှတ်မိနေတာပါ။
အရက်နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးတပုဒ်ကို စက်မှူ(၁)က ဆရာဦးဇော်မြတ်ဝင်းတို့ဦးစီးတဲ့
ခုမရွှေအိရဲ့ ဒီဆောင်းပါးလေးက ဒုတိယဖတ်ဘူးခြင်းပေါ့ဗျာ။
တိုတိုလေးနဲ့ ပြည့်စုံကောင်းမွန်ပြီးဗဟုသုတရစေတဲ့ ဆောင်းပါးကောင်းလေးဖြစ်တယ်လို့ မှတ်ချက်ပေးပါရစေ။
ဟိုးတုန်းက (ဦးစိန်ဝင်းထွန်းရဲ့)သီချင်းလေး အလိုက်နဲ့ ဒီလို ဆိုလိုက်ချင်ပါသေးတယ်။
အရက်ကိုကြိုက်လို့ “ဖတ်” တဲ့သူ
စိတ်ပျော်တတ်လို့ “မန့်” တဲ့သူ
ဖတ်၊မန့်ကြကွယ် ရွာသားများ ………….. ဒါ့ဒါဒ… ဒါ့ဒါဒ။
မသိသေးတဲ့ ဗဟုသုတလေးတွေအတွက်ကျေးဇူးပါ ရွှေအိရေ။
အရက်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မှတ်မှတ်ရရလေး ဖြစ်နေတာကတော့ ၁၉၈၈ ခုနှစ်လောက်တုန်းက ချိုင်းနီးစ် မင်းသမီး ဂေါင်လီက Red Sorghum ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားတကားရိုက်ဖူးတယ်။ အဲ့ဒီ ဇာတ်ကားထဲမှာ Sorghum Liquor ဆိုတဲ့ အရက်ကို ပြောင်းကနေ ချက်ကြတာ အရက်လုံးဝမဖြစ်လို့ အရက်ဖိုက လူတွေ စိတ်ဓာတ်တွေ ကျနေကြတာ။ မမျှော်လင့်ပဲ တညမှာတော့ အလုပ်သမားတယောက်က ဆီးသွားတဲ့အခါ ပြောင်းအရက်ချက်ထားတဲ့ အိုးကြီးထဲ ဆီးတွေ ကျသွားတယ်။ မနက်လည်း ရောက်ရော အဲ့ဒီ ပြောင်းကြိတ်ရည်တွေက အလွန်ကောင်းတဲ့ အရက်တွေ ဖြစ်နေရော။
ဆိုတော့ ကစော်လို့ ခေါ်တဲ့ အချဉ်ဓာတ် ကအသက်လိုအရေးပါကြပုံပေါ်တယ်နော်။
စာရေးပျင်း စာဖတ်ပျင်းမို့ အနှိမ်ခံရလွန်းလို့
(လမ်းသစ်ဖောက်ချင်သူ Environmentalist ကြီး မရွှေအိ) :harr:
ကိုသစ်ရဲ့ ဒုတိယမြောက်ဖတ်ဖူးသော အရက်ဆောင်းပါးက
နောက်ဆက်တွဲတွေကတော့ သိပ်မကောင်းဘူး ဒါ့ကြောင့်
သေရည်သေရက် စီးပွားဖျက်ကို တစ်စက်ကယ်မျှ မသောက်ကြနှင့်
ရှောင်ကြပါလေ ရှင်တော်ဟောသည့်အဆိပ်ရေ တဲ့ဗျာ………
ပျော်ရွင်သောက်စား လောင်းကစား စီးပွားပျက်မည်တိ . . . . . . .
Ciderကို ဘီယာလို့ အမြဲပြောနိုင်ဘူးနဲ့တူ၏။ အချို့ စိုင်းဒါးတွေမှာ အယ်ကိုဟော လုံးဝပါဘူးလေ..။ စပါကလင်လိုမျိုး သောက်လို့ရတယ်မှတ်တယ်… သိသူများ ပြောပါအုံး…။။
ဒါတို့ပြည် ဒါတို့မြေ အဖိုးတန်အရည်…။ :528:
မှန်ပါတယ် အူးလေး/အန်ကယ်/အကိုဂျီး မိုဘိုင်းရှင့်
ကျမပို့စ်တင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဗဟုသုအလို့ငှာ တင်ခြင်းသာ
ဖြစ်ပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူများ ဆက်သောက်နိုင်ပါတယ်။
Cider နှစ်မျိုးချိပါတယ်။ Apple Juice သီးသန့်ကို Cider လို့ခေါ်ပြီး
အယ်လ်ကိုဟောပါတဲ့ Apple Wine ကျတော့ Hard Cider
အူးကြောင်ကြီး ဘီယာ စည်ပိုင်းလိုက်ကို တကျိုက်ထဲမေ့ာချတာ
တိုင်းပြည်တိုးတက်တာကို.. ပြည်သူားတွေ.. ၀ိုင်သောက်နှုန်းနဲ့ တိုင်းတာကြတယ်ကြားဖူးတယ်..
မြန်မာပြည်လည်း.. ၀ိုင်ဖြူ/နီ များများထုတ်သင့်.. သောက်သင့်ပြီထင်ပါတယ်..
မြန်မာ့ဝိုင်တွေ.. နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ရောက်လာရင်.. ၀ယ်ယူသောက်သုံး…အားပေးမယ်ဖြစ်ကြောင်း..
၀ိုင်များများ သောက်နိုင်ခြင်းနဲ့ တိုင်းပြည်တိုးတက်ခြင်း
ဒဂယ်ဘဲ အချိုးချလို့ ရဘာသလား သဂျီးမင်းရှင့်
မေမြို့ဝိုင်ကတော့ မဆိုးပေမဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထုတ်လုပ်
နိုင်ငံတာကာက ၀ိုင်တွေဘဲ တင်ရောင်းနေကျတာမြင်တယ်။
ဖြူနီတော့တိဘူး… အိမ်မှာတော့ ၀ါတာတာနဲ့ ချိသမျှအသီးကိုထုတ်ထားတဲ့ ၀ိုင်ဒွေချိတော့
သူကြီးမင်းေ၇… ၀ိုင် ကိုအသောက်ဆုံးနိုင်ငံ စာရင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်က အခုဆိုရင် ရှေ့ဆုံးရောက်နေမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့က ဈေးကွက်ထဲမှာ (လမ်းဘေးဘီအီးဆိုင်) အများဆုံးထုတ်လုပ်ရောင်းချနေရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သိသလောက် အမှတ်တံဆိပ် တွေပြောရမယ်ဆိုရင် မြ၀တီဝိုင်၊ဆန်ဝိုင်၊နာနတ်ဝိုင်၊စပျစ်ဝိုင်၊ Spy (ဒါကယိုးဒယာကထုတ်တာပါ အမျိုးသမီးတွေတော်တော်သောက်ကျပါတယ်။) ပြည်တွင်ထုတ် အရက်လိုလို ဘီယာလိုလို ၀ိုင်တွေကလည်းအတော်များလှပါတယ်။ မကျဉ်းလစ်ကာ ၊ စည်လစ်ကာ စသဖြင့် အောက်ခြေလူတမ်းစားတွေ အများစုသောက်ကြပါတယ်။ တစ်ပုလင်းမှ ၅၀၀ ကျပ်ထက်မများတဲ့ ဈေးနှုန်း နဲ့ပါ။ နောက်အဲဒါတွေသောက်ပြီး သေဆုံးကြသူတွေ၊ဖောကြသူတွေ၊ ရောဂါရသူတွေကလည်းဒုနဲ့ဒေးပါ။ သူတို့ က ကြိုက်တဲ့ ၀ိုင်အမျိုးစားအနံ့တွေကို ဓာတုဗေဒနည်းတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးလည်းပေါ။ မူးလည်းမူး ၊သောက်လို့လည်းကောင်းကောင်းနဲ့ သောက်ရင်း လျောကျသူတွေများလှပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို နောက်မှ ဆက်ရေးပါဦးမယ်ဗျာ.။ ဂလိုဆိုရင် အနော့်တို့ နိုင်ငံသူ၊နိုင်ငံသားတွေ ၀ိုင်များများသောက်ပြီးတိုးတတ်နေကြသလိုပဲနော့..။ ငရဲကိုလေ..။
Daily chart: wine consumption by country. America glugged more still and sparkling wine than any other country last year. Together with the Chinese and Russians, Americans are driving growth in global wine consumption, which has increased by 3.5% since 2007.
ပြင်သစ်တွေသောက်နှုန်းက.. လူတိုင်း.. တနှစ် France, 45.70 liters ရှိသတဲ့..။ လူတိုင်းနော..
( သများတို့ကတော့ တစ်နှစ်ကို ဘီအီး ဝီစကိန် ထန်းရည်
နိုင်ငံခြားရောက်မေ၇ာက်တော့မသိ တောင်ကြီးအေးသာယာက ၀ိုင်ကတော့ နာမယ်ကြီးဘဲ
အေးသာယာဝိုင် နံမယ်ကြီးမှန်း မသိဝူးတော့။
အရသာတကယ် ကောင်း မကောင်း စမ်းကျိချင်လိုက်တာ
အေးသာယာ Rose ဝိုင် က အမျိုသမီးတွေနဲ့သင့်တော်မယ်ထင်တယ် ..။
ဂနေ့ညနေ သွားရှာဝယ်ပီးစမ်းပါမည်။ :harr:
၀ိုင် ကောင်း မကောင်း စမ်းသောက်ရင်တော့ အဖော်မလိုက်ချင်ဘူးဗျ။
ရှန်ပိန် ကောင်း မကောင်း လေးကော စမ်းသောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ လှမ်းခေါ်လိုက်ဗျာ။
အန်ကယ်ခ အကြိုက်သိသွားဘာဘီ။ နောက်ကြုံရင်
အေးသာယာမှာ ၀ိုင်ယတ်ဒ် ရှိတယ်…
နိုင်ငံတကာအဆင့်မီလို့ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်… ဒါပေမယ့် သိပ်ဈေးကြီးတဲ့ဝိုင်တွေကြတော့လဲ… မသောက်ဖူးတော့ တကယ်အဆင့်မီလား မမီလားမသိဘူးဖြစ်နေတယ်…
တစ်ခေါက်လောက် ၀ိုင်လေးကို အကင်လေးနဲ့ ညချမ်းလေးတစ်ခုမှာသောက်ရအောင်…
ခုမရွှေအိ ဖေါ်ထုတ်မှ အဖေါ်လုပ်ရပိုကောင်းသွားတယ်
လမ်းလျှောက်ရင်း ဆက်သောက်နေမဲ့ အန်ကယ်မိုက် :harr:
အရက်သမား ရေးတဲ့ပိုစ့်မို့လား မသိဝူး ဖတ်ရတာတောင် အနံ့ရလာသလိုလိုပဲ….
စာဖတ်ရင်း အနံ့ကိုပါခံစားလို့ရအောင် ရေးနိုင်သူအဖြစ်
မမ ဘရန်းပို့(စ) ထဲ ဒီ ပို့(စ) လင့်လေး ရှယ်ထားတယ်။
မြန်မာပြည်မှာတော့ အရက်ကို ထန်းလျက်ကနေချက်ကြပါတယ်။ ဟွန့် လူကိုသောက်ချင်အောင်လာလုပ်နေတယ်။ ရွှေအိ…။ တွေရင် တိုက်ပါ။ မတိုက်လို့ကတော့ သေဘီမှတ် ဒါဗြဲ
မမဂျီးခိုင်ဇာ ပိုစ့်ကနေ ဒီဘက်ကကူးလာပါတယ်
အက်ဒါတွေဆို အနံ့မခံနိုင်လို့ 
အို သများ အယက်ဖြတ်ထားဘာဒယ်ဆိုမှ ဘာဒေလာပျော့နေဂျမှန်းမသိဝူး…လူဇိုးးးးဒေ